Yuu Jose Mourinho ku eedeeyay guul daradii xanuunka badneyd ee ka soo gaartay Man City? – Gool FM
Yuu Jose Mourinho ku eedeeyay guul daradii xanuunka badneyd ee ka soo gaartay Man City?
Byare September 10, 2016
(Manchester) 10 Sebt 2016. Jose Mourinho ee caanka ku ah wareysiyada kulul uu bixiyo ciyaarta ka hor iyo ciyaarta kaddiba ayaa markan hadlay kaddib guul daradii ka soo gaartay Man City uu waliba horkacayo ninka ay sida wayn u xifaaltamaan ee Pep Guardiola.
Mourinho ayaa ku eedeeyay guul daradii ka soo gaartay Man City ciyaartoydiisa.
City ayaa uga mahdineysa guusheeda Kevin De Bruyne iyo Kelechi Iheanacho oo u kala dhaliyay goolasha halka goolka madiga ah ee Man United uu saxiixay Zlatan Ibrahimovic.
“Mararka qaar ciyaartoyda waxay niyad jabiyaan tababarayaashooda,” Jose ayaa sidaa ku jawaabay mar la waydiiyay guul daradii ugu horreysay ee kooxdiisa kal ciyaareedka cusub mar uu wareysi siinayay Sky Sports.
“Waxaan heystay labo ama saddex laacib qeybta hore kuwaa oo haddii uu kulanka iminka ahaan lahaa aana ogaan lahaa waxa dhici raba, ma ciyaarsiiyeen.
“Laakiin tani waa kubbada cagta mararka qaarna ciyaartoyda way niyad jabiyaan tababarayaasha mararka qaarna waxay ku siinayaan wax wayn oo aadan fileyn.”.
“Qeybtii hore ee ciyaarta aad ayay inooga fiicnaayeen innaga, si xun ayaan ku bilaabanay innaga.
“Waxaan ku bilaabanay kulanka iyadoo ciyaartoyda qaar ay dhab ahaan ka hooseeyeen heerka caadiga ah marka la eego dhanka diirad saarida iyo maskaxda lagu ciyaaro kulan xawaarahan oo kale.
“Waxaad u baahan tahay inaad ku caqli badnaato sida aad u fikireyso sida aad u ciyaareyso
“Hal amaba labo laacib ayaa ka hooseeyay heerkaas kooxda ayaana lagu ciqaabay midaa.”
Pep Guardiola oo buuga TAARIIKHDA ka soo galay Premier League kaddib guushii uu ka gaaray Man United
Aleksandar Kolarov oo iligiisa ku waayay kulankii Derby Manchester